Homeस्वास्थ्य/विशेषहोसियार हुनुहोस् ! पैसाको लागि डाक्टरले नै मानिसलाई रोगी बनाइरहेका छन : डा. मनबहादुर
September 27, 2018 Spnews स्वास्थ्य/विशेष Comments Off on होसियार हुनुहोस् ! पैसाको लागि डाक्टरले नै मानिसलाई रोगी बनाइरहेका छन : डा. मनबहादुर
दुई जेठाजुले बारम्बार बलात्कार गरेको बुहारीको खुलासा
हेटौंडामा पुरुषद्वारा पुरुष नै बलात्कृत, महिलाहरूले लगाई दिए जुत्ताको माला